jucelino luz -deutschland: Madeleine McCann - nemibono & updates
Nokho, amaphoyisa ufuna a owenze ucansi endabeni Madeleine kancane, ukusesha isekhona blind-labadubuli isibhamu yonke indawo futhi zonke izinsuku indaba olusha mayelana Madeleine Yiqiniso, ukuthi le ntombazane engenacala awuzange bathunjwa, wabe wabulawa ingozi ka sebenzisa umuthi okuningi futhi umzimba wafihlwa laphaya ePortugal.
Nsuku zonke emva ukunyamalala le ntombazane, kuphakama okwashiwo okuthumba nokubukeka yiwo wonke amazwe; Ukuhlukunyezwa ngokocansi; Iqembu ukunukubezwa, futhi sekukhona selokhu ukuwa eziningi zalezo izifundo kanye wonke ngaphandle ukhonkolo kanye nekhambi zizinhle, ie-; lutho definite.the abanhliziyo zakamuva is ebuza abasolwa abane oluphethwe uMnyango Wamaphoyisa of the Scotch bezwe Yard njengoba bebelokhu ukujoyina uphenyo we icala, siye ekhuphuka ukukhishwa eziningi kulolu ukunyamalala, kodwa lutho ukhonkolo. Ufana ba musa ngempela ukwazi owabulala Madeleine McCann ngoba omunye walabo ihlazo esikhulu zibe khona ngokushesha., Sonke siyazi ukuthi ePortugal kukhona ezinye ukuhlaselwa yokulwa amantombazane kanti omunye walabo amacala kwakukubi 5 amantombazane eningizimu Portugal, lapho i-Madeleine engenacala seliphelile
Ukuhlasela kwenzeka phakathi kuka-2004 no-2006, eScotland Yard uthi.
Amaphoyisa aphenya kwaba ukunyamalala girl waseBrithani Madeleine McCann ePortugal ngo-2007 wamemezela waphinda ukuthi ufuna i-owenze sex abahlasela amantombazane emihlanu bengena ezindlini zabo ngesikhathi samaholidi.
Imizi yayisefeni Portugal esifundeni Algarve, eningizimu, lapho Madeleine McCann wanyamalala, futhi ethathwa ikakhulukazi ngemindeni baseBrithani, uthe Scotland Yard.
Phakathi kuka-2004 no-2006 le ndoda ngokocansi amantombazane emihlanu 7-10 ubudala ngesikhathi embhedeni. "Lezi amacala amabi kakhulu kanti akekho Badinga (ukugxila ngenye ..) owake icala kona. Ngabe lezo ubugebengu zihlobene ukunyamalala Madeleine," kusho iphoyisa Andy eRedwood, ngubani uphokophele uphenyo. Lolu hlobo lobugebengu kwenzeka yonke indawo emhlabeni., Futhi une nje ukubheka izindaba zazo egcwele amacala okuthumba, amacala ngobulili sitho yokuthengisa. Bona lokhu kuhlobana:
Bheka-ke ukuthi unakho lutho kulokho okwenzeka Madeleine McCann, le ntombazane kwaba isisulu sesiphambeko ebulilini umuthi ngoba, nobudlova ngokomzimba wawuhilela ukucasha umzimba isidumbu bese kuhlelwa lokhu ukunyamalala njengendlela 'ukuthatha 'I wabhala izincwadi ngaphambi kwenzeka kanye namaphupho ami precognitive, futhi sase wangibonisa iningi ukuthi izinto futhi kuze kube manje ilungile, uthi Jucelino.
Le ntombazane kwaba isisulu kabili: okokuqala on naphezu ulaka abahlupheka 2007 kanti eyesibili nge ukungabi uphenyo lobuchwepheshe xaxa futhi noma yini kungaba deductive kuphela.
Abazali wentombazane, ama-McCanns, eyenziwa umkhankaso, lapho uyise lakhe ligijima konke kanye unina wentombazane njalo ibeka ikhanda phansi (bow ikhanda, ungakhali, akukho nomuzwa wokulahlekelwa, hhayi washaqeka nhlobo, kodwa kuningi bayesaba; yilokho mina wazizwa ngayo lapho ngibuka ubuso wakhe), ngisho kanjalo, wadala iwebhusayithi ukuqoqa izimali. Lelo inqubo wezimali kwaba muva nje kucace on naphezu, a Police wangaphambili isiPutukezi, imuphi ngazo; Nokho, ngiye kuphawuliwe, ukuthi lo nesithakazelo esikhulu sazo, nayo yonke inhlonipho efanele, kwaba ukwazi ukuthi zingaki Madeleine izincwadi kwathengiswa yi-Publishing Company okuyinto awunika ukusekela edition salokho umbhali futhi ucele iNkantolo Yobulungisa ePortugal, the inani 1, 2 izigidi zamaRandi. Esikhundleni yokucela ukuba 'ilungelo impendulo' ngu umonakalo okuthiwa okwabangelwa ukuhlambalaza abasolwa, ngqo njengoba besho abezindaba kuzo zonke izingxenye zomhlaba, kanti njalo ukondla mqondo ongekho; Manje, uma eBrazil, lo mbhangqwana wawuyoba uboshwe ngokushiya ingane engakwazi .. (Madeleine McCann)
Ngo umbono wami, futhi besebenzisa amalungelo ami of nkulumo ezamahala, lo McCanns, kwaba Abavikelwa a izithakazelo British kuleso uhlelo okuyinto ayekade hhayi isikhathi Kuphenywa amaphoyisa Department, yilokho sibonakala ke, ukuthola izivakashi ezivela British Ambassador ePortugal lapho bebhekene kunokwenzeka uphenyo amaphoyisa bekubonakala ziphela (wama) lapho. Futhi nje kwalokho, cishe eyisithupha ukuze uthole Madeleine, njengoba bekholelwa uye bathunjwa kanti uyaphila namanje ..
Singahlosile lapha Angikhulumi nginqobe noma icala lazo kuze kube manje kubonakala sengathi kudinga isikhathi eside, ngcono ungaba ngabo, ngoba le neminikelo kanye umkhankaso egameni lomndeni (ngokusobala yizisulu ezinye izimo) - hhayi isisulu ongenacala Madeleine McCann ongokoqobo kabana yilowo fatality - sizuze izikhwepha eminyakeni yamuva esekelwa iziphathimandla kanye ezinye izindlu abezindaba eNgilandi.
Kodwa manje ngizotshela kusengaphambili lapha, ngolunye usuku futhi ngandlela-thile, lokhu "ukuthwala amanga aluhlaza" uyoboniswa adiliza, kusobala, futhi kuyoba enye yezinto ezinkulu Amahlazo elake kubonakala World.
Ngiyaqiniseka ukuthi ukuthi izigebengu bayobanjwa bese eboshwa ngolunye usuku; futhi ungethuki uma amagama kwenza okubulala ukusungula: "ukumangala kuyokwenziwa kabili."
Akuve ngikubonile emaphusheni ami premonitory, kanti icala izovalwa, kanye nomoya wokuthi intombazane elingenacala wothabatha bonke abanye okuphakade ezulwini.
USolwazi Jucelino Nobrega da Luz
Eingestellt von jucelino nobrega da luz ( 12 ) um 10:25